About Us - คลินิกทันตกรรม
“သင့်အပြုံးက ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်ဆန္ဒဖြစ်သောကြောင့်”
Dental Wellness Clinic သည် မိမိကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုအား တိုးပွားစေသည့်၊ ဘဝ၏အရည်အသွေးများ တိုးတက်စေသည့် ကျန်းမာလှပသောအပြုံးများ ဖာ်ထုတ်ဖန်တီးပေးနိုင်ရေးကို ရည်မှန်းထားရာ လဆာနည်းပညာများ၊ ဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာများဖြင့် ဖန်တီးထားသော အပြုံးဒီဇိုင်း (Digitally Assisted Smile Design) ကို အသုံးပြုလျက် အထွေထွေနှင့်အထူးပြု စ်မျိုးစလုံးအတွက် များပြားစုံလင်သော သွားဘက်ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ ပးနေပါသည်။ CAD/CAM၊ Intra Oral Scanner၊ 3-D Cone Bean x-rayနှင့် ဆးခန်းတွင်ရှိသော သွားဘက်ဆိုင်ရာ ဒီဂျစ်တယ်ဓာတ်ခွဲခန်းကဲ့သို့သော နာက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများအား အသုံးပြုလျက် တစ်ယောက်ချင်းစီ၏ မျက်နှာကျပုံစံကို သဘာဝအတိုင်း လှပလာစေရန် “The Perfect Smile” ကို သီးသန့်ဖန်တီးပေးထားပါသည်။
Dental Wellness Clinic တွင် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ ပိုမိုလုံခြုံမှုရှိစွာ၊ ပိုမိုအဆင်ပြေစွာ၊ ပိုမိုသက်သောင့်သက်သာရှိစွာဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသော အကောင်းဆုံးနှင့် အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံး သွားဘက်ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုသဘောတရားအသစ်ကို ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ American Board of Cosmetic Dentistry ဆရာဝန်များအပါအဝင် သွားဘက်ဆိုင်ရာအထူးဆရာဝန်အဖွဲ့က အကောင်းဆုံးရလဒ်ရရှိအောင် စနစ်တကျ အစီအစဉ်ရေးဆွဲကုသသည့် သီးသန့်ဝန်ဆောင်မှုကို ပးမည်ဖြစ်ပါသည်။
““ေကာင္းမြန္တဲ့ ခံတြင္းသန႔္ရွင္းေရးနဲ႔ လွပတဲ့အၿပဳံးဟာ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ယုံၾကည္မႈနဲ႔ ဘ၀အရည္အေသြးကို တိုးတက္ေစရာမွာ အမ်ားႀကီး အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါတယ္”
Dr. Valailuck Kiatthanakorn
DDS. DIRECTOR OF DENTAL wellness CLINIC, BDMS WELLNESS CLINIC
၁၉၆၉ ခုနှစ် အာက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်နေ့၊ Bangkok Dusit Medical Services စတင်လမ်းဖွင့်လိုက်သည့် အချိန်မှ စတင်၍ BDMS သည် ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် အရှေ့တောင်အာရှတွင် ဆးရုံပေါင်း ၄၅ ရုံအထိ တိုးချဲ့ တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့အသိအမှတ်ပြုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများအပါအဝင် ဆရာဝန်ပေါင်း ၁၀ဝ၀ဝ ကျာ်ရှိသော ကျွန်ုပ်တို့ BDMS သည် လူနာများအတွက် အကောင်းဆုံးသော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများ ပးနိုင်ရေးဟူသော ဆးရုံစတင်တည်ထောင်စဉ်ကတည်းက ခံယူထားသည့် ရည်မှန်းချက်ကို ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်ရန် မျှာ်မှန်းထားပါသည်။ Park Nai Lert Hotel ကို လက်ခံဝယ်ယူလိုက်ခြင်းသည် ရာဂါကာကွယ်မှုဆိုင်ရာ ထူးခြားကောင်းမွန်ရေး အခြေတည်စေရန်အတွက် BDMS ၏ ပထမဆုံး ခလှမ်းပင်ဖြစ်ပါသည်။
သမိုင်းအမွေအနှစ်ကြွယ်ဝသော Park Nai Lert Hotel မနေရာကို မူလက မစ္စတာ Phraya Bhakdi Noraset က ပိုင်ဆိုင်ခဲ့သည်။ သူသည် ယင်းနေရာကို ကမ္ဘာအဝှမ်းမှ လက်မှုအနုပညာပစ္စည်းများ ပသသည့် စင်တာတစ်ခုအဖြစ် ထူထောင်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ ယခုအခါတွင် အဆိုပါမြေနေရာသည် ပြီးခဲ့သောခေတ်အတွင်းက စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် နည်းပညာဆိုင်ရာထူးခြားအံ့ဩစရာများ၏ အမှတ်သင်္ကေတတစ်ခု ဖစ်ပါသည်။ ထို့အတူ လူတွေအနေဖြင့် စိမ်းလန်းသာယာမှုကို ခံစားနိုင်မည့်နေရာလည်း ဖစ်ပါသည်။
အလားတူစွာပင် BDMS Wellness Clinic ကိုလည်း ကမ္ဘာအဝှမ်းရှိ အကောင်းဆုံးသော ရာဂါကာကွယ်ရေးနှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများ ပးနိုင်ရေးဟူသော မူဝါဒအပေါ်တွင် အခြေခံလျက် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သော အမှတ်သင်္ကေတတစ်ခုသဖွယ် ထင်ရှားသည့်ဟိုတယ်ကို ဝယ်ယူနိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် Bangkok Dusit Medical Services အနေဖြင့် မိမိ၏ရည်မှန်းချက်ကို အပြည့်အဝ အကောင်အထည်ဖော်ခွင့် ရသွားစေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်မှုများ၊ ကျယ်ပြန့်သောကွန်ရက်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုတို့ကို ပါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် ကာင်းမွန်သောကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် ကမ္ဘာ့အဆင့်စံနှုန်းများကို ချမှတ်မည့် အာရှ၏ပထမဆုံးသော ထိပ်တန်းရောဂါကာကွယ်ရေးဌာန ဖစ်လာမည်ဟု မျှာ်လင့်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ကို ရွးချယ်သင့်သည့် အကြောင်းများ
Dental Wellness Specialist အဖွဲ့၏ တိုက်ရိုက် ပုစုစောင့်ရှောက်မှုအောက်တွင် သွားဘက်ဆိုင်ရာကုသမှုများကို သင်၏လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ သင်ရယူမည့် သွားဘက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုသည် သင့်အတွက် သီးသန့်ပြုလုပ်ထားခြင်းကြောင့် သင့်တော်မှုအရှိဆုံးဖြစ်ကြောင်းကို သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ထံ လာရောက်ဝန်ဆောင်မှုရယူသော လူနာများ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ လူနာများက ယုံကြည်စွာအပ်နှံထားသော ကျန်းမာရေးအချက်အလက် အတွင်းရေးများ၏ လုံခြုံမှုကို ကာကွယ်ရန် သန္နိဋ္ဌာန်ချမှတ်ထားပါသည်။which we are entrusted with by our patients.
ကျွန်ုပ်တို့တွင် သွားဘက်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်အသီးသီး၌ ကျွမ်းကျင်သော အထူးကုဆရာဝန်အဖွဲ့များ ရှိခြင်းကြောင့် အထွေထွေဖြစ်စေ၊ အထူးပြုကုသမှုဖြစ်စေ စ်မျိုးလုံးအတွက် များပြားစုံလင်သော သွားဘက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများ ပးနေပါသည်။ သင့်တွင် မည်ကဲ့သို့သော သွားနှင့်ပတ်သက်သည့် ပဿနာရှိနေသည်ဖြစ်စေ သင့်လျော်သော အထူးကုဆရာဝန်များက စီစဉ်ဖြေရှင်းပေးပါလိမ့်မည်။
နောက်ဆုံးပေါ် နည်းပညာများနှင့် ဆးခန်းပိုင် ဒီဂျစ်တယ် ဓာတ်ခွဲခန်း
လိုချင်သော ရလဒ်ကို တိတိကျကျ ပးနိုင်ရေးအတွက် CAD/CAM၊ CT Scan၊ Intra Oral Camera နှင့် ဆးခန်းတွင် သွားဘက်ဆိုင်ရာ ဒီဂျစ်တယ်ဓာတ်ခွဲခန်းကဲ့သို့သော နာက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာ၊ ကိရိယာများကို တပ်ဆင်ထားပါသည်။
- သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်တွင် အကောင်းဆုံးသော သွားဘက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများ ပးနိုင်ရန်အတွက် ဆရာဝန်များကို ၎င်းတို့၏ ကမ္ဘာ့အသိအမှတ်ပြု ကျွမ်းကျင်မှုများ၊ စိတ်အားထက်သက်မှုများကို အခြေခံလျက် ရွးချယ်ထားပါသည်။
Dental Wellness Clinic မှ အကောင်းဆုံးသော သွားဘက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများ ရရှိရုံမက ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း သွားဘက်ဆိုင်ရာကုသမှုခံယူသည့် ခရီးစဉ်ကို အမှတ်ရစရာများနှင့် ထူးထူးခြားခြားဖြစ်စေရန်အတွက်လည်း လမ်းညွှန်၊ ကူညီ၊ ညှိနှိုင်းပေးမည် ဖစ်ပါသည်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှု တိုးစေကာ ဘဝအရည်အသွေးတိုးတက်စေမည့် ကျန်းမာပြီး လှပသောအပြုံးများ ရရှိလာစေရေး။